Olee otú na-ere gị Broken iPhone maka Kasị Ego
E nwere dị iche iche ihe na-ere gị iPhone. Nwere ike ị chọrọ nweta nkwalite ndị iPhone 4 ka iPhone 5s; ọ na-agbajikwa na ị na-achọghị iji rụkwaa ya; nnọọ natara onye ọhụrụ maka ụbọchị ọmụmụ; ma ọ bụ na ị chọrọ ka ịgbanwee gaa na na Android ekwentị dị ka Samsung Galaxy S5. N'agbanyeghị ihe mere na ị chọrọ na-ere gị eji iPhone, ị ga-achọ inwe ezi price na kpuchido nzuzo gị. Na nke a, mkpa ka ị mara:
Part 1. Ihe ị ga-mara tupu ere iPhone
Part 2. Best Ebe Iji na-ere iPhone maka Kasị Ego
Ihe unu ga-amata tupu ere iPhone
1) Ọ bụrụ na ị na-aga na-eji ọhụrụ iPhone, ụzọ kasị mma ndabere gị iPhone bụ iji iTunes ma ọ bụ iCloud. Ị nwere ike ndabere gị iPhone na otu click site iTunes ma ọ bụ iCloud. Mgbe ahụ ị pụrụ nanị weghachi ya na gị na ọhụrụ iPhone.
2) chọrọ iji a ekwentị dabeere na ndị ọzọ na usoro dị ka Android? Mgbe ahụ, ị na-agaghị na-azọrọ na e ndabere gị iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud, n'ihi na i nwere ike iji nkwado ndabere na mpaghara faịlụ n'ọdịnihu n'ụzọ ọ bụla, ọbụna na-agụ ya. Kara gị mma iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, dị ka Wondershare TunesGo nkwado ndabere na mpaghara gị mgbasa ozi faịlụ, na kọntaktị na kọmputa, nke mere na ị nwere ike mbubata ha ọhụrụ gị na ekwentị. Ma ọ bụ i nwere ike dị nyefee niile data si ochie iPhone ọhụrụ gị na ekwentị n'ihu nke na-ere. My nkwanye bụ nke abụọ na otu. Ọ bụ nnọọ mfe. Echegbula onwe gị banyere n'amaghị ọ bụla a na ụdị ngwaọrụ. Ị nwere ike iji MobileTrans, nke na-ahapụ gị nyefee data n'etiti iPhone, Android igwe na Symbian igwe. Ọ na-arụ ọrụ dị ka a amara.
Ị nwere ike nweta ya ikpe version for free ebe a!
A ga-mara mma onye data dị ka ozi, kọntaktị, foto, akụ akụkọ na ndị ọzọ dị ka nke a na gị iPhone, n'ihi na ị na-na na na-eji ya maka nnọọ ogologo oge. Ya mere, na-adịghị kpọmkwem ere gị iPhone enweghị eme a nhichapụ ọrụ. Ị ga-emerịrị ya. Nke a bụ ihe dị ukwuu dị mkpa dị ka akwado gị data, ma ọ bụ ị ga-atụfu nzuzo gị. E nwekwara ụzọ abụọ ka ihichapu niile data na gị ji iPhone.
1) Tọgharia gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala: Ọtụtụ ndị na-ahọrọ otú a ka ihichapu niile data na ha iPhones mgbe ha chọrọ ime nke a. Ọ dị mfe: pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-aghọ onye ọhụrụ.
2) Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ data mgbake omume na ahịa naghachi data si iPhone, i nwere ike ịbụ nchegbu na ndị ọzọ nwere ike agbake data gị iPhone. Ọ dịghị mkpa. I nwere ike ịgbalị Wondershare SafeEraser ma ọ bụ Wondershare SafeEraser maka Mac ihichapu ihe niile na gị iPhone,-eme ka ọ onye ọhụrụ enweghị ihe ọ bụla nke gị onwe onye data.
Ị nwere ike ibudata Wondershare SafeEraser ikpe mbipute a!
Best Ebe Iji na-ere iPhone maka Kasị Ego
Olee otú na-ere
Craigslist $ 225-- $ 500 Ego ma ọ bụ ndị ọzọ na ịkwụ ụgwọ ụzọ Adabere na-ere ákwà na Post na craigslist na izute asịwo Jiri ya tụnyere ndị ọzọ ụlọ ahịa, craigslist nwere ike ịbụ ebe kacha mma na-ere Mmanu iPhone nke bụ na ezi udi, ma na-achọ mgbalị na ndidi. Ị kwesịrị ị na ewepụkwa ihe spammers na scammers, chọta a mma n'ebe ọha ịgbacha ndibiat na asịwo.
eBay $ 230 - $ 430 PayPal Mgbe ina ugwo (pickups na-n'ụlọ dị) Mbido auction ma ọ bụ họrọ a ofu price ndepụta Ka o doo ndị ọrụ na-na-agwa gị iPhone na elu price, i kwesịrị ime n'aka gị iPhone bụ dị mma. Ọ bụ smart nwere igbe na ngwa tinyere ngwaọrụ ma na-ezi foto maka ha.
Amazon $ 120-- $ 408 Amazon Onyinye Kaadị Ụgbọ mmiri ndị iPhone ka Amazon iji nweta onyinye kaadị 1.Submit na ahia-in iPhone;
2. Ụgbọ mmiri iPhone ka Amazon iji nweta onyinye kaadị; Na ị na-achọrọ na-ekwu ihe ọnọdụ gị iPhone bụ na ozi maka ngwa, ụgbọelu, ikike, agba, wdg. Ya mere, biko ka o doo anya na ihe niile ozi tupu oge eruo.
BestBuy $ 148 - $ 346 Best Buy Onyinye Kaadị ma ọ bụ ego Ụgbọ mmiri ndị iPhone ma ọ bụ mee ka ọ na-Best Buy Store Ere online ma ọ bụ na Best Buy Adobe-na-ngwa agha ụlọ ahịa Ọ bụrụ na gị iPhone na-kpam kpam agbajikwa, ị nwere ike ịhọrọ ọzọ na-echekwa, dị ka Walmart. Ọ bụ ezie na Best Buy ga-eziga ya azụ gị na-enweghị ihe ọ bụla ụgwọ, ị na-ihe ọ bụla. N'ihi na kpam kpam agbajikwa iPhone, Walmart na RadioShack Ruo-enye gị $ 70 ma ọ bụ $ 80.
NextWorth $ 96 - $ 340 Ego Ụgbọ mmiri ndị iPhone tupu ụgwọ 1.Select nlereanya ị chọrọ na-ere;
2.Answer ajụjụ banyere gị iPhone;
3. Ụgbọ mmiri iPhone ma na-akwụ ụgwọ; Adịghị overrate gị eji iPhone ma ọ bụ ị ga-emechu ihu;
Nne mgbada $ 96 - $ 401 PayPal, Lelee, Amazon Onyinye Kaadị Nne mgbada ga-enye a igbe na tupu ugwo mbupu labeelu gị mgbe ị na-anabata price online; 1. Chọta gị ihe na www.gazelle.com;
2.Answer ajụjụ ụfọdụ banyere gị iPhone;
3.Confirm na-enye na ugwo;
4.Ship iPhone ma na-akwụ ụgwọ; Tupu ere gị eji iPhone ebe a, na ị na-achọrọ zaa a ajụjụ ole na ole banyere gị iPhone, ị ga-mma ga-esi mara nkọwa nile banyere gị iPhone mbụ.
Apple Store $ 0 - $ 336 Apple Onyinye Kaadị Ụgbọ mmiri gị iPhone mgbe na-atụzi si Apple 1.Go ka website zaa ha ajụjụ ụfọdụ;
2.Get atụmatụ na ụgbọ mmiri ya na-Apple;
3.Get ugwo; Tupu ere gị eji iPhone, jide n'aka na ị na-na na na agbanyụrụ Chọta My iPhone (Ntọala> iCloud> Chọta My iPhone), na ọ dịghị ihe ọ bụla mmiri mebiri na niile ngwa na-ezi, ma ọ bụ ị ka mma chọta ọzọ ụlọ ahịa n'ihi na ị ga- ugwo na-erughị. Ọ bụrụ na ị na-ere gị iPhone na Apple mkpọsa Store, ọ ga-ekwe ka ị na ahia gị ochie iPhone ka a otuto mgbe upgrading.
Walmart $ 80-- $ 315 Walmart eGift Kaadị Ụgbọ mmiri ya n'ihu na-akwụ ụgwọ
1.Go ka website zuru ezu appraisals;
2.Ship gị eji iPhone; 3.Confirm ndibiat na-enweta kwụọ ụgwọ;
Ọ bụrụ na gị iPhone bụ tolly gbajiri, ị nwere ike na-ere ya ka Walmart. E wezụga $ 70 ma ọ bụ $ 80 gị ga-enweta, gị iPhone ga-dispoded na environmentally n'ụzọ dị mma. Naanị ihe ị chọrọ ime bụ na-eme ka n'aka gị iPhone bụ na Walmart "Model Aha" ndepụta.
GameStop N'okpuru $ 200 GameStop n'aka ma ọ bụ ego Da iPhone obodo GameStop 1.Get gị iPhone valuted na GameStop.com;
2. Bipute gị see okwu na-ewetara ya Gamestop. Gamestop na-enye gị a otutu ihe uru maka gị iPhone ọ bụrụ na ị dị njikere ịnakwere na-ụlọ ahịa Ebe E Si Nweta kama ego.
RadioShack $ 72- $ 300 Ego Ụgbọ mmiri na-free ma ọ bụ mee ka ọ ka obodo RadioShack 1.Get iPhone inyocha online;
2.Accept ndị see okwu na ụgbọ mmiri ya ma ọ bụ mee ka ọ ka obodo RadioShack ụlọ ahịa; Dị ka Walmart, ị nwere ike na-ere gị totoally gbajiri iPhones ka RadioShack n'ihi na ihe karịrị $ 70;